ဘောလုံးလောကကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့တဲ့ နည်းဗျူဟာများ (၂)
11 Oct 2018 . 6:41 PM
ဘောလုံးလောကမှာ မဟာဗျူဟာနဲ့ ကစားကွက်ပုံစံ ( Strategies and Formations) တွေဟာ အသစ်တွေ ပေါ်လာလိုက်၊ ကာလအတော်ကြာရင် ပျောက်ကွက်သွားလိုက်နဲ့ သံသရာ လည်ပတ်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ တချို့နည်းဗျူဟာတွေကြတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်တံ့ခဲ့သလို ခေတ်အလိုက် ဘောလုံးသမားတွေ၊ နည်းပြတွေဟ အဲဒီ နည်းဗျူဟာကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အသုံးပြုခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တချို့ Strategies တွေဆိုရင် အခုလက်ရှိအချိန်အထိ ဘောလုံးလောကမှာ လွှမ်းမိုးမှု ရှိနေဆဲပါပဲ။ အခုဖော်ပြမှာက ဘောလုံးလောကကို ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ နည်းဗျူဟာအကြောင်း အပိုင်း(၂)ဖြစ်ပြီး တစ်ခေတ်တစ်ခါက ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ Total Football အကြောင်းကို Akhayar Sports ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
Total football ဆိုတာနဲ့ ရေးနပ်စ်မစ်ရှယ် Rinus Michels ၊ ယိုဟန်ခရိုက်ဖ် Johan Cruyff တို့ကို ပရိသတ်တွေ ပြန်လည်မြင်ယောင်မိမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒီနည်းဗျူဟာနဲ့ နယ်သာလန်၊ အေဂျက်စ်အသင်းတို့ဟာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးစင်မြင့်ထက်မှာ သမိုင်းဝင် အောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့ကြဖူးတယ်။ Total football ကို ရေးနပ်စ်မစ်ရှယ်နဲ့တွဲဖက်ပြီး လူသိများပေမယ့် တကယ်တမ်း ဒီ နည်းဗျူဟာကို ဖန်တီးခဲ့သူက အေဂျက်စ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်နည်းပြတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျက်ရေးနိုးလ် Jack Reynolds ပါ။
Total football နည်းဗျူဟာရဲ့ Basic Theory က ဂိုးသမားကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ Outfield Player တွေ အကုန်လုံး နေရာစုံ ကစားနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ဥပမာပြောရရင် ‎Centre-back တစ်ဦးက တိုက်စစ်ကို ရှေ့အထိ လိုက်ပြီဆိုရင် သူ့နေရာကို ကွင်းလယ်လူတစ်ဦးက အစားပြန်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ တိုက်စစ်မှူးဟာ တောင်ပံထွက် ကစားခဲ့မယ်ဆိုရင် Winger က Central Position ကို နေရာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကစားပုံကြောင့် ဘယ်လို Formation နဲ့ ကစားမလဲဆိုတာ ပြိုင်ဘက်တွေအတွက် ခန့်မှန်းရခက်စေပြီး တစ်ယောက်ချင်းကိုလည်း Marking လုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
Total Football ရဲ့ ဖခင်ကြီးလို့ တင်စားရမယ့် ဂျက်ရေးနိုးလ်ရဲ့ နည်းဗျူဟာကို ၁၉၅၀ ၀န်းကျင်မှာ ဟန်ဂေရီအသင်းနည်းပြ Gusztáv Sebes က ပိုကောင်းလာအောင် ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ ဒီ နည်းဗျူဟာနဲ့ ဟန်ဂေရီအသင်း အောင်မြင်မှုတွေရယူခဲ့ချိန်မှာ ဘန်လေအသင်းနည်းပြ Jimmy Hogan ကလည်း အဲဒီ Style ကို အတုခိုးခဲ့တာကြောင့် Total Football ဟာ အဲဒီအချိန်ခါတုန်းက တဖြည်းဖြည်းလူသိများလာခဲ့တယ်။ ဒီနည်းဗျူကို Develop ထပ်လုပ်ပြီး သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့သူက ရေးနပ်စ်မစ်ရှယ်ပါပဲ။
ရေးနပ်စ်မစ်ရှယ်ဟာ ဂျက်ရေးနိုးလ်ရဲ့ လက်အောက်မှာ ကစားခဲ့ဖူးလို့ ဒီနည်းစနစ်ကို ကောင်းကောင်း ကျေညက်နားလည်ထားသူပါ။ ရေးနပ်စ်မစ်ရှယ်ရဲ့ Total Football မှာ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းပြခဲ့တာက ဒတ်ခ်ျဂန္ထ၀င် ယိုဟန်ခရိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းဗျူဟာနဲ့ အေဂျက်စ်အသင်းဟာ ဥရောပဖလား (ချန်ပီယံလိဂ်)ကို ၁၉၇၂ ကနေ ၁၉၇၄ အထိ (၃)နှစ်ဆက် ရယူခဲ့သလို ရေးနက်စ်မစ်ရှယ်ဟာ ၁၉၇၄ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ နယ်သာလန်အသင်းကို ဒုတိယ၊ ယူရို-၁၉၈၈ ချန်ပီယံဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
အေဂျက်စ်အသင်းကို ရေးနက်စ်မစ်ရှယ် ကိုင်တွယ်ခဲ့တုန်းက သူဟာ အကယ်ဒီ ကစားသမားတွေ အားလုံး (၄-၃-၃)ကစားကွက်မှာ နေရာစုံ ကစားတတ်အောင် လေ့ကျင့်ခိုင်းခဲ့တယ်။ Total Football ကို အမွေဆက်ခံခဲ့သူက ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်ဖြစ်ပြီး သူလက်ထက်မှာ အပြောင်းအလဲ နည်းနည်းတော့ လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တုန်းက ၃-၄-၃ Diamond Shape ကစားကွက် အသုံးပြုခဲ့ပြီး အဲဒီကစားကွက်မှာ ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်လာတာက ဂွါဒီယိုလာ Guardiola ဆိုတဲ့ လူငယ်ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်ဟာလည်း ဘာစီလိုနာအသင်းမှာ ဆုဖလားတွေ အများကြီး ရယူခဲ့ပြီး လာလီဂါ(၄)ကြိမ်ဆက်၊ ဥရောပဖလား (၁)ကြိမ်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ Total Football အခန်းကဏ္ဍက မှေးမှိန်သွားပေမယ့် ဒီနည်းဗျူဟာကို အခြေခံပြီး ဆင့်ကဲဖြစ်တည်လာတဲ့ နည်းဗျူဟာတွေ ထွက်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ပါတော့တယ် . .
Photo:Knvb,These Football Times,El País,fantasista10,Pinterest
ဘောလုံးလောကကို အပွောငျးအလဲဖွဈစခေဲ့တဲ့ နညျးဗြူဟာမြား (၂)
ဘောလုံးလောကမှာ မဟာဗြူဟာနဲ့ ကစားကှကျပုံစံ ( Strategies and Formations) တှဟော အသဈတှေ ပျေါလာလိုကျ၊ ကာလအတျောကွာရငျ ပြောကျကှကျသှားလိုကျနဲ့ သံသရာ လညျပတျနတောပါ။ ဒါပမေဲ့ တခြို့နညျးဗြူဟာတှကွေတော့ နှဈပေါငျးမြားစှာ တညျတံ့ခဲ့သလို ခတျေအလိုကျ ဘောလုံးသမားတှေ၊ နညျးပွတှဟေ အဲဒီ နညျးဗြူဟာကို နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အသုံးပွုခဲ့တာတှလေညျး ရှိပါတယျ။ တခြို့ Strategies တှဆေိုရငျ အခုလကျရှိအခြိနျအထိ ဘောလုံးလောကမှာ လှမျးမိုးမှု ရှိနဆေဲပါပဲ။ အခုဖျောပွမှာက ဘောလုံးလောကကို ကွီးကွီးမားမား ပွောငျးလဲစခေဲ့တဲ့ နညျးဗြူဟာအကွောငျး အပိုငျး(၂)ဖွဈပွီး တဈခတျေတဈခါက ရပေနျးစားခဲ့တဲ့ Total Football အကွောငျးကို Akhayar Sports ပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
Total football ဆိုတာနဲ့ ရေးနပျဈမဈရှယျ Rinus Michels ၊ ယိုဟနျခရိုကျဖျ Johan Cruyff တို့ကို ပရိသတျတှေ ပွနျလညျမွငျယောငျမိမှာ အသအေခြာပါပဲ။ ဒီနညျးဗြူဟာနဲ့ နယျသာလနျ၊ အဂေကျြဈအသငျးတို့ဟာ ကမ်ဘာ့ဘောလုံးစငျမွငျ့ထကျမှာ သမိုငျးဝငျ အောငျမွငျမှုတှေ ရယူခဲ့ကွဖူးတယျ။ Total football ကို ရေးနပျဈမဈရှယျနဲ့တှဲဖကျပွီး လူသိမြားပမေယျ့ တကယျတမျး ဒီ နညျးဗြူဟာကို ဖနျတီးခဲ့သူက အဂေကျြဈအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျနညျးပွတဈဦးဖွဈတဲ့ ဂကျြရေးနိုးလျ Jack Reynolds ပါ။
Total football နညျးဗြူဟာရဲ့ Basic Theory က ဂိုးသမားကလှဲပွီး ကနျြတဲ့ Outfield Player တှေ အကုနျလုံး နရောစုံ ကစားနိုငျရမယျဆိုတဲ့ အခကျြပါပဲ။ ဥပမာပွောရရငျ ‎Centre-back တဈဦးက တိုကျစဈကို ရှအေ့ထိ လိုကျပွီဆိုရငျ သူ့နရောကို ကှငျးလယျလူတဈဦးက အစားပွနျဖွညျ့ရမှာဖွဈပွီး တကယျလို့ တိုကျစဈမှူးဟာ တောငျပံထှကျ ကစားခဲ့မယျဆိုရငျ Winger က Central Position ကို နရောယူရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ကစားပုံကွောငျ့ ဘယျလို Formation နဲ့ ကစားမလဲဆိုတာ ပွိုငျဘကျတှအေတှကျ ခနျ့မှနျးရခကျစပွေီး တဈယောကျခငျြးကိုလညျး Marking လုပျဖို့ မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။
Total Football ရဲ့ ဖခငျကွီးလို့ တငျစားရမယျ့ ဂကျြရေးနိုးလျရဲ့ နညျးဗြူဟာကို ၁၉၅၀ ဝနျးကငျြမှာ ဟနျဂရေီအသငျးနညျးပွ Gusztáv Sebes က ပိုကောငျးလာအောငျ ပွငျဆငျခဲ့တယျ။ ဒီ နညျးဗြူဟာနဲ့ ဟနျဂရေီအသငျး အောငျမွငျမှုတှရေယူခဲ့ခြိနျမှာ ဘနျလအေသငျးနညျးပွ Jimmy Hogan ကလညျး အဲဒီ Style ကို အတုခိုးခဲ့တာကွောငျ့ Total Football ဟာ အဲဒီအခြိနျခါတုနျးက တဖွညျးဖွညျးလူသိမြားလာခဲ့တယျ။ ဒီနညျးဗြူကို Develop ထပျလုပျပွီး သမိုငျးဝငျအောငျမွငျမှုတှေ ရယူခဲ့သူက ရေးနပျဈမဈရှယျပါပဲ။
ရေးနပျဈမဈရှယျဟာ ဂကျြရေးနိုးလျရဲ့ လကျအောကျမှာ ကစားခဲ့ဖူးလို့ ဒီနညျးစနဈကို ကောငျးကောငျး ကညြေကျနားလညျထားသူပါ။ ရေးနပျဈမဈရှယျရဲ့ Total Football မှာ အကောငျးဆုံး ခွစှေမျးပွခဲ့တာက ဒတျချြဂန်ထဝငျ ယိုဟနျခရိုကျပဲဖွဈပါတယျ။ အဲဒီနညျးဗြူဟာနဲ့ အဂေကျြဈအသငျးဟာ ဥရောပဖလား (ခနျြပီယံလိဂျ)ကို ၁၉၇၂ ကနေ ၁၉၇၄ အထိ (၃)နှဈဆကျ ရယူခဲ့သလို ရေးနကျဈမဈရှယျဟာ ၁၉၇၄ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ နယျသာလနျအသငျးကို ဒုတိယ၊ ယူရို-၁၉၈၈ ခနျြပီယံဖွဈအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့ပါတယျ။
အဂေကျြဈအသငျးကို ရေးနကျဈမဈရှယျ ကိုငျတှယျခဲ့တုနျးက သူဟာ အကယျဒီ ကစားသမားတှေ အားလုံး (၄-၃-၃)ကစားကှကျမှာ နရောစုံ ကစားတတျအောငျ လကေ့ငျြ့ခိုငျးခဲ့တယျ။ Total Football ကို အမှဆေကျခံခဲ့သူက ယိုဟနျခရိုကျဖျဖွဈပွီး သူလကျထကျမှာ အပွောငျးအလဲ နညျးနညျးတော့ လုပျခဲ့ပါသေးတယျ။ ယိုဟနျခရိုကျဖျဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးကို ကိုငျတှယျခဲ့တုနျးက ၃-၄-၃ Diamond Shape ကစားကှကျ အသုံးပွုခဲ့ပွီး အဲဒီကစားကှကျမှာ ကှငျးလယျဗိုလျခြုပျဖွဈလာတာက ဂှါဒီယိုလာ Guardiola ဆိုတဲ့ လူငယျကစားသမားတဈဦး ဖွဈပါတယျ။
ယိုဟနျခရိုကျဖျဟာလညျး ဘာစီလိုနာအသငျးမှာ ဆုဖလားတှေ အမြားကွီး ရယူခဲ့ပွီး လာလီဂါ(၄)ကွိမျဆကျ၊ ဥရောပဖလား (၁)ကွိမျရယူနိုငျခဲ့တယျ။ အခုနောကျပိုငျးနှဈတှမှော Total Football အခနျးကဏ်ဍက မှေးမှိနျသှားပမေယျ့ ဒီနညျးဗြူဟာကို အခွခေံပွီး ဆငျ့ကဲဖွဈတညျလာတဲ့ နညျးဗြူဟာတှေ ထှကျပျေါနဆေဲဖွဈပါတော့တယျ . .